China Plane oghere oghere mkpuchi aluminom na -emepụta ya na ndị na -eweta ya Chenyu
Ihe mkpuchi mkpuchi aluminom
Jiri oghere dị n'etiti ọgịrịga abụọ nke mkpuchi aluminom iji jiri kposara dozie ya, wee mechie gluu ka ọ rụchaa nke a bụ ụdị nrụnye nke mkpuchi aluminom.
Ihe mkpuchi aluminom na -emepụta ahịrị n'etiti ihe mkpuchi aluminom iji mee ka enwere ụdị usoro na -asọ asọ, na -ejikwa ụda dị iche iche nke gluu wee mepụta ahịrị nke ụda dị iche iche, nke enwere ike ịhazi ya na ọdịiche ya na elu mkpuchi aluminom, dabere ọnọdụ ọnọdụ ahụ.
1. Ịdị arọ, ịdị mma siri ike, ike dị elu.
2. Ọdịmma dị mma na nguzogide corrosion.
3. Ezi ọrụ aka. .
4. mkpuchi mkpuchi na agba dị iche iche ..
5. Ọ dịghị mfe ntụpọ, ọ dị mfe ịsacha na idobe ya.
6. nrụnye dị mfe na ngwa ngwa na owuwu.
7. Enwere ike megharịa ya ma megharịa ya, nke dị mma maka nchekwa gburugburu.
Ihe na owuwu
Ihe mejupụtara ya bụ nke nwere ogwe, ihe siri ike na ihe mejupụtara koodu angular. Enwere ike idobe koodu nkuku ozugbo wee zọọ ya akara, a pụkwara apịaji ya na panel ahụ.
A na-ejikọ stiffener na nkedo ịgbado ọkụ eletrik n'azụ elu bọọdụ ahụ, na-eme ka ọ bụrụ nke siri ike, na-akwalite ike na nkwụsi ike nke mgbidi mkpuchi aluminom, wee hụ na ịdị larịị na iji ogologo oge yana nkwụsị ala ọma jijiji.
Ihe mkpuchi aluminom dị mma maka ịchọ mma nke mgbidi ime na mpụga, ihu ihu n'ọnụ ụzọ, windo, ihe ịchọ mma kọlụm, paseeji dị elu, àkwà ndị na -agafe agafe, idebe elevator, mbara ihu, ihe ngosi mgbasa ozi, akwa ụlọ dị n'ime, wdg.
Nke gara aga: Mkpuchi mkpuchi aluminom
Osote: Ihe mkpuchi aluminom enweghị nkebi
Wapụtara usoro mkpuchi mkpuchi aluminom
Mkpuchi mkpuchi aluminom
Imitomi osisi ọka aluminom mkpuchi
Ihe mkpuchi aluminom enweghị nkebi
Nomi nkume mkpuchi aluminom